पहिलोपटक पूर्वाधार विकास बैंक स्थापनासम्बन्धी कानुन बनेपछि ! — Arthatantra.com
Arthatantra.com > बैक > पहिलोपटक पूर्वाधार विकास बैंक स्थापनासम्बन्धी कानुन बनेपछि !
पहिलोपटक पूर्वाधार विकास बैंक स्थापनासम्बन्धी कानुन बनेपछि !
काठमाडौ । अब पूर्वाधार विकास बैंक स्थापना हुने भएका छन् । केन्द्रीय बैंकले पूर्वाधार विकास बैंकसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था जारी गरेपछि त्यस्ता बैंक स्थापनाका लागि बाटो खुलेको हो ।
राष्ट्र बैंकले शुक्रबार ‘पूर्वाधार विकास बैंकसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था २०७४’ सार्वजनिक गरेको छ । यो सँगै मुलुकमा पहिलोपटक पूर्वाधार विकास बैंक स्थापनासम्बन्धी कानुन बनेको छ।
सरकारले विगत लामो समयदेखि पूर्वाधार बैंक स्थापना गर्ने योजना बनाउँदै आए पनि नीतिगत व्यवस्था नहुँदा त्यसले मूर्त रूप पाउन सकेको थिएन ।
नीति जारी भएपछि पूर्वाधार विकास बैंकका लागि लाइसेन्स पनि खुला भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । अब मापदण्ड पुगेका आवेदनहरूले पूर्वाधार विकास बैंक स्थापनाका लागि अनुमति पाउनेछन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया( मा पूर्वाधार विकास बैंक स्थापना गरिने र त्यसका लागि नीतिगत व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गर्ने उल्लेख छ । सोही व्यवस्थाअनुसार बाफिया पारित भएको करिब ४ महिनापछि राष्ट्र बैंकले पूर्वाधार बैंकसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था गरेको हो । ‘मापदण्ड पुगेका आवेदनहरूलाई पूर्वाधार विकास बैंक स्थापनाका लागि अनुमति दिने राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायणप्रसाद पौडेलको भनाइ छ ।
पूर्वाधार विकास बैंकको न्यूनतम चुक्ता पुँजी २० अर्ब रुपैयाँ हुनुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । स्थानीय लगानी मात्रै रहेर यस्तो बैंक स्थापना भएमा संस्थापक समूहले न्यूनतम ५१ प्रतिशत देखि ७० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउने व्यवस्था छ । यस्तो अवस्थामा उक्त कम्पनीले सर्वसाधारणलाई न्यूनतम ३० प्रतिशत र आफ्ना कर्मचारीलाई न्यूनतम ०।२ प्रतिशतसम्म सेयर छुटयाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
यसैगरी बैंकले ६ महिनाभित्र पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा रुपान्तरण हुन कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा आवेदन दिनुपर्नेछ । यो अवधिमा सम्बन्धित बैंकले आवश्यक भौतिक पूर्वाधार पनि तयार गरिसक्नुपर्नेछ व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । इकान्तिपूर बाट
प्रकाशित मितिः २०७४ साउन २८
२०७४ साउन २८ गते १२:४५ मा प्रकाशित
साताको नेप्से परिसूचक ११.५२ अंकले घट्यो
पहिरोले पुरिएर एकै परिवारका ४ को मृत्यु
अन्तराष्टिय बिमा सम्मेलनको उद्घाटन अर्थमन्त्रीले गर्दै, पाँच सय बिमा बिज्ञ एकै ठाउँमा
नेप्से परिसूचक ओरालो लाग्ने क्रम आजपनि कायम
कति बढ्यो त शान्ति सैनिकको भत्ता ? नेपाली सेनाले गर्यो यस्तो निर्णय !
आहा ! पोखराको सराङकोट,भदौ १६ देखि तेस्रो सराङकोट महोत्सव हुँदै